Critic » ရွှေပြည်တော် မျှော်တွေးလို့ …စီမံပေးတဲ့အစိုးရ	8
Posted by Thint Aye Yeik on Jun 9, 2016 in Critic, History, My Dear Diary, Myanma News, Think Different | 8 comments
kai says: ဘာသာရေးဖက်က”တည်”ပြီးတွေးကြပုံပေါ်တဲ့အတွက်….
ဒီအတိုင်းသွားလို့ကတော့…. လက်၁၀ချောင်းနဲ့… ၁ခါ.. ၂ခါ.. ၃ခါ.. ၄ခါ… ၅ခါ… xခါ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Thint Aye Yeik says: ဘာသာရေးဘက်က ”တည်”ပြီး မတွေးဘဲ လုပ်သွားရင်ကော. . .
ဒီလိုပဲ သွားရမယ် မှတ်တယ်။ သားတော့ ကျေနပ်တယ်
kai says: အင်း.. ကျေနပ်ကျေနပ်…။
အဲဒီရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတနံတဖျား.. . ဘယ်သူတွေဘယ်လို…ခွဲဝေယူထားခဲ့တယ်… သိရင်.. ကျေမွပြီးကို.. နပ်နေတော့မှာ..။ အနိစ္စ..။
Thint Aye Yeik says: အနတ္တ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အင်း.. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံဆိုတာကလည်း ဘုရားတွေချည်း များနေတော့… မတတ်နိုင်ပုစ်လေ.. တွေးချင်တာတွေးကြပေါ့.. ဟော့
Thint Aye Yeik says: အမေစု ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာ
uncle gyi says: တိုင်းပြည်အတွက်လိုတကယ်လိုအပ်တယ်ဆို
Thint Aye Yeik says: တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ဒိုးပြားတွေ ဒေါ်လှတွေက နံပါတ်တစ် ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့။